The PKIN building of Warsaw where European Association of Osseointegration Conference is being held.
Trains and buses at the heart of Warsaw city
I am right now in Warsaw, Poland attendingaconference. I'd like to share my experiences and will try to post soon. Thank you very much for visiting my blog.
Posted by Dr. Nyan at 9:52 PM0comments
Posted by Dr. Nyan at 9:53 PM7comments
၂၀၁၁ စက်တင်ဘာလ အတွင်းမှာ တိုးတက်မှုတွေအနည်းငယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာနေပြီး ကိုယ်ရေးတာကို proxy မခံဘဲဖတ်ခွင့်ရလာတာက တစ်ခုအပါအ၀င်ပါ။ တိုးတက်မှုအနည်းငယ်လို့ပြောရတာက ဒီထက်ပိုပြီးများများနဲ့မြန်မြန် ပြောင်းသင့်ပြင်သင့်စတင်လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ထင်မြင်လို့ပါဘဲ။ နိုင်ငံဆင်းရဲတွင်းက အမြန်လွတ်ပြီးတိုးတက်ဖို့ဒီလောက် speed နဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူး။ ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြုပြင်သင့်တာတွေအမြန်လုပ်သင့်နေပါပြီ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၁နှစ်ကျော်ရပ်တန့်ထားခဲ့ရတဲ့ ရှားရှားပါးပါး Dental Health Education Blog လေးကို ပြန်ဆက်ရေးနိုင်ပြီမို့ အချိန်ရတိုင်းပို့စ်အသစ်တွေတင်သွားပါမယ်။ ခုချိန်ထိ ပို့စ်အဟောင်းတွေကို လာအားပေးဖတ်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေများကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by Dr. Nyan at 1:46 AM2comments